Chii chinonzi yoga wiricheya? | Karman® Mawiricheya
hwiricheya iyo yoga yakareruka vhezheni yeyoga, munhu anozvinyima wechiHindu, uye nekurairirwa pamweya. Izvi zvinosanganisira kufungisisa, kudzora mweya uye mamiriro anoita nemuviri. Iine hutano hwakawanda zvinobatsira uye inobatsira kusvika padanho repamusoro rekuzorora. Kutenda kurerutswa kweyoga ye vanoshandisa wiricheya naivowo vanogona kuzvijairira kuti vabatsirwe nekusunungurwa kwekushushikana uye kudzikisa BP.
It yakakosha kuti uone kuti sekungabatsira vamwe, wiricheya iyo yoga inogona zvakare kukanganisa vamwe.
Neichi chikonzero, kubvumidzwa nachiremba kunokosha pakuziva kana wiricheya yoga iri kana haina kuchengetedzeka uye izvo zvimwe zvingatadziswa zvingave zvinoenderana nemamiriro ezvinhu chaiwo. Sarudzo yechiremba inofanirwa kuremekedzwa sezvo vari ivo vanoziva zvakanyanya kune izvo muviri unogona kana kusakwanisa kuita.
Izvo zvinowanzoitika zvinomiririra wiricheya vashandisi mubatanidzwa wekutambanudza kwemuviri wepamusoro wavanokwanisa kuita kubva kwavo wiricheya. Kune yakakura nzvimbo yechinzvimbo, iyo 's yakakosha kuva rubatsiro kuve nechokwadi chekuchengetedza kwako uchiita yoga.
Heino muenzaniso weimwe yakatambanudzwa uye nzira dzekufema:
Mombe inotambanuka inoitwa nekugara wakatwasuka pane iyo wiricheya nemaoko ari pamabvi kana muzvidya. Wobva wafemera mukati, zvinyoronyoro kumonera mafudzi kumashure arch musana wako uye uuye nemusoro kumusoro kumusoro. Kana wagadzirira kuburitsa switch kukati kutambanudza nekuchengetedza maoko pazvidya kana mabvi uye nekumonyorora musana wako kumberi. Zvakare, bvumira chirebvu kuti chiuye chakananga kuchipfuva nemapendekete kudonha kumberi. Bata zvigaro uye mweya zvishoma nezvishoma kwemasekondi mashoma kuti uwane kutambanuka kumativi akasiyana emusana.
Hwakasimudza maoko pose zvichabatsira kutambanudza kumusoro zvese nekugara mudenga, kutarisa kumberi nekusimudza maoko wakasimudza mudenga zvakanyanya zvinogoneka. Mushure mekuitira kwekufema kwakati kuti divi rinotambanudzwa rinogona kuitwa nekugara wakagara wakamira uye nekusvika pamusoro pemusoro neruoko rwerudyi ruoko rwekuruboshwe rwuchitsigira. Exhale kana uchisvika pamusoro pemusoro uye fema kana uchidzoka wakanangana nepakati.
Mushure mekujaira zvekare exercises mumwe anogona kuita kukotamisa kumberi nekufemesa paunogara wakamira uye uchifema paunenge uchisvika pamusoro pemabvi ako kuti ubate pasi nemaoko ako. Chiitwa ichi ichakugadzirira iwe kune yakawedzera divi kona. Ingoita zvakapfuura kusimbisa muviri uye pachinzvimbo che kushandisa maoko ese kusvika pasi rimwe ruoko rwunobata pasi rumwe rwuchinanga kudenga. Izvi zvinogadzira kutenderera senge kutambanudza musana wese. Kana uchinge wapedza ita chiuno kutambanudza nekuunza gumbo rimwe pamusoro perimwe uchifema uye kufema sezvo iwe uchizendamira kumberi kubva muchiuno chako. Shandura makumbo uye dzokorora kufema kwakadzika.
Nguva dzose bvunza chiremba wako usati waita kurovedza muviri kutsva hurumende uye ramba uchiteerera kumutumbi wako.
Yoga iguru kurapwa kwechisikigo neimwe nzira. Inogona kubatsira nekumira kwako, kufema, uye kudzikamisa kushushikana kana kushushikana.
Ona mamwe yoga poses nekudzvanya iyi link iripazasi: